CMS Expo: Chinhu Chinokosha Pakati Pekutengesa neTekinoroji Misangano muMidwest | Martech Zone
CMS Expo: Chinhu Chinokosha Pakati Pekutengesa neTekinoroji Misangano muMidwest
Wednesday, May 12, 2010 Svondo, October 4, 2015 Michael Reynolds
Ndakave nemufaro wekutaura pa CMS Expo svondo rapfuura kuChicago. Aka kaive kekutanga nguva yandakaenda kumusangano uyu ndakanga ndisina chokwadi chekutarisira. Ndakashamiswa zvinofadza nekukura kwayo.
Iyo CMS Expo musangano wekudzidza uye bhizinesi wakapihwa kune Zvemukati Management Systems uye webhusaiti masevhisi. Iyo inoratidzira akati wandei emakwara akavakirwa kutenderedza bhizinesi uye tekinoroji madingindira. Mateki mashanu pamusangano wegore rino aive Joomla, WordPress, Drupal, Plone, uye Bhizinesi. Ndichiri kushanda pakuvaita kuti vaone CMS yangu yandaida nguva inotevera. Mateki mana ekutanga akange akatarisana neCMS yakatarisana nepo bhizinesi raifukidzira kushambadzira, kutsvagisa, maitiro akanakisa, vezvenhau, uye mimwe misoro yebhizinesi yakanangana.
Ini ndakapa mharidzo mbiri dzebhizimusi track: "7 Maitiro emaWebhu Anonyanya Kubudirira" uye "Twitter yeBhizinesi" Vaviri vakafamba zvakanaka uye vakawana mhinduro huru. Raive boka guru revanhu uye ndaive nemibvunzo yakawanda yakanaka uye hurukuro.
Izvi ndizvo zvandaifarira nezveCMS Expo:
Munhu wese aive neushamwari zvakanyanya uye akasununguka
Masipika anga akanaka
Iyo webhusaiti yemusangano yaive inobatsira uye yaitwa zvakanaka
Nzvimbo (Hotera Orrington) yaive yakanaka
Varongi vacho vanonyatsoisa pachiitiko chakakura ine yakawanda network
Iyo inodhura, zvinoreva kuti mabhizimusi epamusoro-soro aripo (hongu, ndakafarira izvi)
Chinhu chega chandisina kufarira zvakanyanya yaive nyaya yekuti zvese zvaida kumhanyisa nguva saka ndaifanira kucheka zvikamu zvangu zvese zvipfupi asi iyi yaive nyaya diki.
Ndakaenda kumisangano yakakura paGoogle Analytics nekutsvaga kwemusika uye ndakave nenguva yakanaka yekusangana nevanhu vatsva. Avo vanofarira matekinoroji ehunyanzvi, kunyanya ane hukama nechimwe cheyakavhurika-sosi maCMS, vanowana izvo zvakakosha kwazvo. Ini ndakabaya musoro wangu mune mashoma eichi zvikamu uye zvakare ndakaona yakawanda yakanaka yeTwitter chatter nezve aya matra. Vazhinji vevatauri paCMS Expo vaive vatangi vekutanga uye vanogadzira mamwe eCMS anomiririrwa.
Kuuya ku2010 CMS Expo kwaive kwakatenderedza mazana mana uye zvaisanganisirawo izere boka revaratidziri vakakura vakaita basa rakanaka rekuzvishambadza ivo uye nekupa nharaunda. Vakanga vachitopa mapads! Ini ndaifarirawo kuona vakurukuri vazhinji uye vaipinda kubva kunzvimbo dziri kure, kusanganisira France, neNorway.
Mamiriro ekunze emusangano uyu zvirokwazvo aive ekunakidzwa, kudzidza, uye kubatsira vamwe uye zvaifadza kuve chikamu chawo. John naLinda Coonen (CMS Expo founders) vakaita basa rakanaka uye ndinotarisira chiitiko chegore rinouya.
Kana iwe uchishanda mukushambadzira uye / kana tekinoroji, funga kuenda kune rinotevera CMS Expo. Zvichava zvakakodzera nguva yako.
Tags: cms expomusangano wekushambadziramidwest musanganotechnology technology
Vhidhiyo: Yemagariro Media Rumutsiridzo 2
Textbroker Inotangisa Yemahara Yakasarudzika Yemukati Yekuongorora
May 18, 2010 pa 9: 17 AM
Chinyorwa chikuru, ndatenda. Chero buzz nezve ExpressionEngine kuCMS Expo?
May 21, 2010 pa 7: 11 AM
Kwete peep nezve ExpressionEngine 🙂